UNWTO General Assembly ikozvino muMadrid: Zurab Pololikashvili inyanzvi. Ko Saudi Arabia ichaita here?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » UNWTO General Assembly ikozvino muMadrid: Zurab Pololikashvili inyanzvi. Ko Saudi Arabia ichaita here?
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • misangano • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Waini & Midzimu
Munyori Mukuru weUNWTO Zurab Pololikashvili
Vateereri veiyo ichauya UNWTO General Assembly ingochinjika kubva kumakurukota kuenda kumamishinari kana kwete-kuratidzwa nhasi, nzvimbo yacho payakatama kubva kuMorocco ichienda kuSpain.
Aya ndiwo mashoko akanaka kuna Secretary-General Zurab Pololikashvili, asi yakaipa nyaya yekushanya kwenyika.
Inogona kubatsira Saudi Arabia here?
Sezvakafanotaurwa na eTurboNews uye vari mukati, nhasi UNWTO yakazviita pamutemo.
Iyo General Assembly yakarongerwa Marrakesh, Morocco kubva munaNovember 30 kusvika Zvita 02 ichave iri munzvimbo ine hushamwari, Madrid, Spain
Secretary-General Zurab Pololikashvili akashandisa simba rake muMadrid yekujairira. Kuve nekushamisika General Assembly muMadrid ichavhara sarudzo yake, anofanira kutarisira.
Kubva Zurab Pololikashvili anobva kuGeorgia akatora helm yeiyo World Tourism Sangano musi waNdira 1, 2018, sangano rakava nhepfenyuro. UNWTO yakashanduka kubva pasangano rakashama rakajeka kuita mugomba rezvinyengeri, zvakavanzika uye kunyarara. Kutya mabasa kwakatongwa mukati meUNWTO Headquarter kuMadrid, Spain.
Kubata nedambudziko hombe rakatarisana nenyika ino munhoroondo yazvino, UNWTO yakava isingateereri, isingashande, kunze kwekunge yabatsira Secretary-General pachayo.
COVID-19 yaive yakakura kwazvo, UNWTO yakapunyuka mukusimudzira waini - kushanya.
Vatori venhau vakanga vakamirira kunze kwehofisi yeUNWTO kuWorld Travel Market muna 2018 na2019 kungoziviswa kuti Secretary-General aisakwanisa kuenda kumusangano wake wega wenhau.
Pamusangano we 2019 UN Climate Change Musangano COP 2019 Madrid, Secretary-General weUNWTO akada mukana wemufananidzo nevatungamiriri venyika asi akabva panzvimbo yacho achimhanyisa kunzvenga chero mibvunzo yemidhiya kana kumwe kubatika pachiitiko ichi.
Kumusangano unouya wa2021 UN Climate Change Musangano COP 2021 kuGlasgow mukupera kwemwedzi uno, Secretary-General anofanira kuratidza chiso. Anofanirwa kunyengerera nyika kuti dzimutsigire seSecretary-General paGeneral Assembly.
KuMusika Wenyika Unouya (WTM) 2021 iri kuuya, Secretary-General achange achienda kuhurongwa hweHurumende. Izvi zviri mukufarira kwake ega masvondo mashoma asati asimbiswa. Rinomirira kuti rionekwe kana achasangana nevatori venhau pamusangano wevatori venhau. Hakuna kukokwa kwakadai kwakagamuchirwa na eTurboNews asi.
Iye anofanira kuoneka zvine revo kubatanidzwa. Naizvozvo arikusundira chimiro chePR kuti atungamire kuziviswa kweCOP 2021.
Kusimbiswa kwake paGeneral Assembly muna Mbudzi mushure mekunge UNWTO Executive Council yamusarudza zvakare muna Ndira zvakangove nyore kuZurab.
Kuve neGeneral Assembly muMadrid ndizvo zvaidiwa naZurab nguva dzese. Pololikashvili anofanirwa kukorokotedzwa seyakanakisa ezvematongerwo enyika manejimendi.
Zvinogona kufanofungidzirwa zviri nyore kuti mushure mekunge akunda kunzwisiswa kwekunzwa kugungano kuMadrid, bhizinesi reUNWTO richadzokera pane zvakajairwa kwaari.
Zvakajairika zvinoreva kunyarara, hapana chinobatanidzwa kuita, hapana hutungamiriri hwakakodzera.
Zvinoreva kudzivirira kubatana pamwe neWTTC uye hombe indasitiri yakazvimiririra, vachiregeredza nyaya dzeCOVID-19, uye kuramba uchifunga nezvechinangwa chake chezvematongerwo enyika chekuve mutungamiriri weGeorgia.
Nhasi Hurumende yeMorocco yauya kuzomununura mukumisa General Assembly muMarrakesh.
Izvi zvakafanotaurwa na eTurboNews uye ruzivo ruzivo kwenguva yakati.
Cherekedza Verbale yakarongedzwa kuUNWTO Nhengo dzeNyika nhasi (Gumiguru 23,2021)
Secretariat yeWorld Tourism Organisation (UNWTO) inopa rumbidzo yayo kunhengo yeSangano uye ine rukudzo kuzivisa kuti, mutsamba yakanyorwa musi wa15 Gumiguru uye yakagamuchirwa kuUNWTO Secretariat musi wa18 Gumiguru 2021, Hurumende yeMorocco yakazivisa Secretariat yekuti shanduko yemamiriro azvino epasi rose ane chekuita nedenda reCOVID-19 haibvumidze kuitwa kwechikamu chemakumi maviri nemana cheGeneral Assembly muMarrakesh muna24 pamazuva akabvumiranwa e2021 Mbudzi - 30 Zvita mumamiriro ezvinhu akadaro anovimbisa hutano hwakakosha uye mamiriro ekuchengetedza evatori vechikamu.
Sekirariari yaishuvira kuyeuka kuti musangano wechi24 weGeneral Assembly uchasangana muna 2021 sekusarudzwa neGeneral Assembly kuburikidza nechisarudzo 727 (XXIII) pamusangano wayo wechi23, zvinoenderana neChinyorwa 10 cheMitemo uye Mutemo 1.1 weMitemo yeMabatiro weGeneral Assembly.
Zvinoenderana nechiremera chakapihwa pasi peManongedzo ekusarudzwa kwenzvimbo dzemisangano yeGeneral Assembly dzakatambirwa neGeneral Assembly kuburikidza nechisarudzo 631 (XX), nechinangwa chekuvimbisa kuenderera mberi kwekushanda kweSangano kune biennium 2022-2023 uye mashandiro akarongeka enhengo dzayo zvichiteerana neMitemo, uye mushure mekubvunzana naSachigaro weKanzuru yeKurukota uye neHurumende yeSpain, Secretariat ine mufaro wekuzivisa kuti musangano wechi24 weGeneral Assembly uchaitirwa kuMadrid, Spain, Hofisi Huru yeSangano, pamazuva mamwe chetewo sekuziviswa kune ese Nhengo dzeMasangano, kureva 30 Mbudzi kusvika 3 Zvita 2021. Secretariat ichakurumidza kupa Nyika dzese Nhengo ruzivo rwakakodzera maererano nechikamu ichi.
Secretariat yeWorld Tourism Organisation inozvipa iwo wega mukana uyu wekuvandudza kuNhengo dzeNyika zvivimbiso zvekufungisisa kwazvo.
Madrid, 23 Gumiguru 2021